Guddiga arimaha Diinta iyo Owqaafta ee Golaha Shacabka oo ka shiraya Khilaafka Xejka – Kalfadhi
Guddiga arimaha Diinta iyo Owqaafta ee Golaha Shacabka oo ka shiraya Khilaafka Xejka
Waxaa mudooyinkii ugu dambeeyay taagan Khilaaf u dhaxeeya Wasaaradda arimaha Diinta iyo Owqaafta Soomaaliya iyo Wasaaradaha maamul Gobaleedyada kuwaas oo ku muransan hab maamulka arimaha Xejka.
Khilaafka ayaa ka dhashay Guddi ay magacaawday Wasaaradda arimaha Diinta iyo Owqaafta Soomaaliya kuwaas oo tartan u qabta Shirkadaha qaadaya dadka Xujeyda ah ee ka baxaya Soomaaliya.
Wasaaradaha arimaha Diinta iyo Owqaafta ee Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa ka soo horjeestay Guddigaas waxayna dalbadeen in qoondadooda la siiyo oo aysan ka qayb gelin tartanka ay Waddo Wasaaradda arimaha Diinta ee DF-ka Soomaaliya.
Guddiga arimaha Diinta iyo Owqaafta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ay wadaan dadaalo ay ku xalinayaan Khilaafka labada dhinac si uusan muran u gelin Xejka sidii hore u dhacday sanadkii hore.
Xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo katirsan Guddiga arimaha Diinta iyo Owqaafta ayaa Kalfadhi u sheegay in ay la socdaan xaaladaha ka soo cusboonaaday arimaha Xejka islamarkaana ay dhowaan xal u raadin doonaan.
“Dowladda Guddi ayey magacaawday maamulada qaarna waa ka soo horjeesteen waxaan rabnaa inaa ogaano waxa la isku haayo” ayuu yiri Xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo la hadlay Kalfadhi.
“Sanadkii hore ayuu dib u dhacay waqtiga bixitaanka Xejka muran badanna waa galay marabno in sidaas oo kale ay dhacdo” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Yacquub Cali oo katirsan Guddiga arimaha Diinta iyo Owqaafta ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.